Ihowuliseyili yangasemva Strong ethule yezoMoto Iibhayisikili zombane Umvelisi kunye noMthengisi | IIMI
Ngasemva Strong cwaka Motor Motor Electric ibhayisekile
I-EWAY (ngoku kwisizukulwana sayo sesiThandathu) yibhayisekile yombane ecaleni kwoluhlu lwethu lweemodeli zebhayisekile zedolophu, enesixhobo samandla ombane esithandwayo esingasemva (i-350W igama), amandla eebhuleki zediski kunye nokukhupha okuphezulu Ibhetri ye-Samsung. Ngesantya esiphezulu ukuya kuthi ga kwi-30km / h yinto ebonakalayo yabasebenzi oyithandayo. Le modeli ithengiswa ngokungqongqo njenge 'flatroad, ukusetyenziswa kwepropathi yabucala kuphela'. Ukuhonjiswa ngobuqili ukuze ifane ne-ebike eqhelekileyo, i-EWAY ayinanto iyenye. Njengoko sicebisa, le bhayisekile yombane yirokethi epheleleyo. Iyakwazi ukuhamba ngesantya esiphezulu kwinto evakalelwa kukuba ayisindi, inamandla, kodwa ayikhangeleki ngathi sisithuthuthu sombane. Imodeli entsha ye-Eway ikwanamavili aqinileyo esixeko kunye nebhetri ye-Samsung 288Wh.
Amandla oGcina iMoto
I-EWAY ikunye neBAFANG yangasemva kweHub Motor ibonelela ngenkxaso enamandla. Ingabetha i-32KM / H ngesantya esiphezulu. I-250W yangasemva kweHub Motor inamandla ngokwaneleyo kwaye ithembekile. Ngokudibanisa ne-7 Shimano gear kunye ne-sensor efanelekileyo ye-cadences, i-EWAY inamava endalo okuhamba ngebhayisikile ngenkxaso yombane.
Amandla okumisa afanelekileyo
Uninzi lweebhayisikile azihambi rhoqo ukuya kuthi ga kwi-32km / h kwiflethi ngoko ke kubalulekile ukuba namandla okumisa. Kulapha apho iziqhoboshi zediski zingena khona. Ibhayisekile nayo inee-brakes, ezikhupha iimoto kwiimoto xa kufakwa iziqhoboshi. Oku kuthetha ukuba iziqhoboshi zinobomi obulula kwaye inkqubo ikhuseleke ngokugqithileyo.
Ukuqwalaselwa ngononophelo kuyilo lwazo naziphi na iinkqubo zezithuthi zombane kukulingana kwamandla phakathi kweseli nganye, ipakethi yebhetri, iBMS (inkqubo yolawulo lwebhetri), isilawuli kunye nemoto. Uyilo lokukhupha olunokubakho lohlobo lweseli kufuneka luhlale luphakamile kunemfuno yokukhutshelwa kwepakethi kwaye ipakethi kufuneka ibe nakho ngakumbi kuneemfuno zoyilo ze-BMS. Ukukhutshwa kwamandla ebhetri kunye ne-BMS ngokudibeneyo kufanele ukuba kube ngaphezulu kuneemfuno ezibekwe kwipakethi yimoto kunye nomlawuli. Ke xa sidibanisa i-EWAY kunye neemfuno zangoku kunye neevolthi, ziiseli zamandla aphezulu zeSamsung kuphela eziwulungeleyo umsebenzi.
Hayi ibhayisekile rhoqo
I-Eway yenzelwe ukuJongeka njengebhayisekile, kodwa uzive ngathi yiCrossover phakathi kwebhayisekile, kunye nesithuthuthu sombane. Le bhayisekile ibonelela ngokonwaba okungenamda, ngelixa ukhwele umatshini osengumboniso webhayisekile, hayi isithuthuthu. I-Finesse engakumbi iya kuYilo lweMveliso enokuthi isebenze kodwa ikwangobuqili ngokufanayo. Umboniso we-LCD unikezela nge-Usb Port ukuyenza ukuba ibe nokwenzeka ngakumbi kwiTrend.
Egqithileyo Umgangatho ophezulu we-Aluminium Alloy 36V 250W Bike yeSixeko soMbane
Okulandelayo: Isithuthuthu sokubaleka esincinci esincinci esincinci esincinci esiphakathi